16 Waxyaabood Oo Ay Tahay In Haweeney kasta Ay Si Joogta Ah Ugu Dhahdo Ninkeeda - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»16 Waxyaabood Oo Ay Tahay In Haweeney kasta Ay Si Joogta Ah Ugu Dhahdo Ninkeeda
Haweeney kasta waxay rabtaa in qaali laga dhigo iyadoo ninkeeda ka rabta in sidii boqoradii oo kale ula dhaqmo, balse waxaa sidoo kale muhiim ah in ninkaada aad dareensiiso inuu kugu weynayahay.
Waa kuwaan 16 waxyaabood oo haweeney kasta ay tahay inay ku dhahdo seygeeda si joogta ah.
1. “Waankugu faanaa.” Inaad sidaas dhahdo waxay seygaaga dareensiinee inuu kugu weynayahay.
6 Waxyaabood Oo Muhiim Ah Oo Haweenku Ay Ka Rabaan Ragga
2. “ Waan jeclahay qaababka aad u ekaato markaad shatigaas qaadato”. Ninkaaga wuxuu rabaa inuu ogaado inaad ka heshay.
3. “Waankugu kalsoonahay waana xushmeeyaa”. Nin kasta waxa uu rabaa inuu ogaado in lamaantiisa ay ku kalsoontahay.
4. “Waanku faraxsanahay inaan kula kulmo waayo waad igu weyntahay.”
5. “Waan jeclahay qaabka aad kalsooni iigelisay.”
6. “Waanku faraxsanahay inaan wada jir nahay.”
7. “Waanku aaminsanahay.”
8. “Wan jeclahay inaan kasoo kaco dhinacaaga.”
9. “Waanka xumahay.” Haka faanin inaad raali geliso markaad qaldantahay.
10. “Waan jeclahay qaabka aad u dhoolla cadeyso.”
11. “Waanku cafiyay.” Ninkaaga wuu sameynayaa qalad mararka qaar marka waa muhiim inaad cafiso.
12. “Waan ku kalsoonahay inaad sameyso waxyaabaha saxda ah.” Tani waxy tuseysaa inaad aaminsantahay go’aanadiisa.
13. “Waxaa tahay nooca aabaha aan caruurteyda rabo inay yeeshaan.” Tani waxay tuseysaa inaad aragtid tayooyinka wanaagsan ee Aaabanimo uu leeyahay.
14. “La kulankaaga waxa uu ahaa wixii ugu wnaaagsanaa ee igu dhacay.” Tani waxay tusineysaa inaadan ka shalaaynin la-kulankiisa.
15. “Waan jeclahay inaan waqti kula qaato.” Wuxuu rabaa inuu ogaado inaad ku raaxeysato wehelkiisa.
16. “Waanku jeclahay.” Tani waa waajib. Waa inaad dhowr ku tiraahdaa maalintii.